Asadnaa Suudi: Ha ku Daalin Dhaliisha Dowlada, Balse ku Dadaal Ficil ahaan waxaad Dalkaaga ku Biirin Laheyd – Radio Daljir
Asadnaa Suudi: Ha ku Daalin Dhaliisha Dowlada, Balse ku Dadaal Ficil ahaan waxaad Dalkaaga ku Biirin Laheyd
Luulyo 30, 2018 1:46 g 1
Madaxweynihii sodon iyo shanaad (35aad) ee soo marey waddanka Mareykanka, John F. Kennedy, ayaa Janaayo 1961 maalintii dhaarta uu xafiiska kula wareegayey ka jeediyey hadal qiimo badan oo dhegaha dadka niyadsamida wadaniyeed leh raag ku yeeshey, kaas oo uu ula jeedey in dadka fikirkoodu yahey maskaxda dowladu ku shaqeeyso sidaa awgeyd ay macalimiinta, ardeyda iyo qof walba aragtidiisu wax tar weyn u tahey dowlada. Isagoo yidhi “Ha isweydiin waxa wadankaagu kuu qaban karo, laakiin isweydii waxa aad adigu wadankaaga u qaban kartid!”
Haddaba qofka daawanaya banooniga iyo kan ciyaaraya sidee la tahey waxaa xariifsan kan daawanaya oo ay u muuqataqaa dhaliisha iyo habacsanaanta ka dhex jirta ciyaarta, balse dhab ahaan waxaa dadaal badan oo sidii uu ku guuleysan lahaa ku hawlan qofka garoonka ku jira.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhaliil muuqata oo ishu qabaneyso durbadiiba taas oo aan u baahneyn laacibnimo in aad ku daraaseysid ama ku fahantid meesha dhaliishu ka muuqato iyo meelaha laga ilduufey oo mudan in farta lagu taago si wax looga qabto.
Waxaan daawadey qaabka loo soo dhaweeyo madaxda sare ee dalka markey safar shaqo ugu kacitimaan dalka gudo iyo dibedba ama iyagu ku soodhaweyaan madaxda kale ee waddanka soo booqoneysa.
Safaradii ugu dambeeyey ayaan Isbar dhig ku sameeyey. labo sawir oo ishu qabtey ayaa waxey kala ahaayeen mid uu madaxweyne Farmaajo oo Asmara booqanaya iyo halka ay wada taaganyahiin (Platfotm) labada masuul (Madaxweyne Farmaago iyo Isias Afwerki) marka laga raacayo astaanta wadamada (national anthem) ayna salaan sharafta bixinayaan ciidamada bambeyda halkaas oo ah meel taag ah isla markaana dedan oo dusha sare ka daboolan, halka labada calana ay ka dul babanayaan labo waran oo dusha saqafka sare laga taagey, qorraxda, dabeysha iyo roobkana laga xeendaabtey hadiiba midkood jiro,
Halka midka labaad uu yahey Madaxweyne Farmaajo uu isagu Muqdishu ku soo dhaweenaayo Raysul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, halka ay labada masuul wada taaganyihiin eePlatform-ka yahey meel taag yar ah oo korka ka bannaan, labada calana waramo dhulka ku mudan ay ka babanayaan, dabeysha, saxarka, qorraxda iyo roobkana aan wax xeendaab ah u dhaxeyn.
Sawirada aan kor ku soo xusey markaad isku fiirisid waad dareemi kartaa quruxda iyo haybada ka muuqata laba muuqaal. Ciidanka salaan sharafta bixinaayana iyo meesha madaxdu ay istaagto ee Platform-ka loo yaqaano marka laga raacaayo astaanta wadamada (National anthem) inta lagu guda jiro gegida diyaaraha iyo madaxtooyada waa muraayada waddanka laga fiirsho ee mar walba mudan in la qurxiyo.
Xukuumadu aad ayey wax uga qabatay arrimo badan, wayna ku mahadsan tahay, meelaha u baahan in ay sii qurxiso iyaga oo aanay wax weyn kaga baxeynin oo qarash ah isla hawshii qaab kale loo dhigo bilicda iyo haybada dawlada wax ka taraysa ayaa waxay tahay qaabka loo qurxin karo dharka ciidanka salaan sharafta bixiya ee marna munaasabadaha waddaniga ah salaan sharafta siiya madaxda dawladda xilliyada madaxdu dalka soo booqato-na soo dhaweeya.
Waxaan qabaa tallaabo wanaagsan in ay tahay meelaha qaarkood in aynu isku dhererino dalalka hareeraha inaga xiga, innaga oo aan u gudbin dalalka kale ee inaga fog.
Tusaale ahaan wadamada aan isku urur gobaleedka wadanahey nahey ee IGAD iyo kuwa deriska inala ah ee Jabuuti, Kenya, Itoobiya, Sudan iyo Ereteriya haddaad u fiirsatid askarta salaan sharafta bixisa qaabka labis koodu yahay wax badan ayaa laga faa‘iidi karaa, qaab ka sii qurxoona loo sii habayn karaa askarteena, oo koofiyadaha biraha ah ee gudguduudan/cascas kuwo ka haboon loogu badeli karo, dharkan kaakiga ahna qaab casriya loogu badeli karo waa isla dhaqaalihii uun oo qaab sidan ka duwan loo adeegsan karo.
Askartan waxay ka tirsan yihiin madaxtooyada maadaama ay had iyo jeer madax hortaagan yihiin, waa muhiim in muuqaalkooda la qurxiyo.
Dhawaan xafiisyada madaxtooyada aad ayaa wax looga qabtay, waxaad xataa ka dareemaysaa labiska shaqaalaha Madaxweynaha iyo Raysul Wasaarasha, gaar ahaan dhalinyarada ku hareeraysan oo muuqaalkoodu aad u qurxoonyahey, suudhadka ay ku labisan yihii gaar ahaan dhalinyarada Raysul Wasaaraha la shaqeeya.
Ugu dambeytii, marka laga yimaado wadaniyadnimada, wanaaga iyo quruxda qofka muwaadinka ah uu wadankiisa Soomaaliya la jecelyay waxaan rajeynayaa in aan arko mustaqbalka dhow in wax laga badalo arrimahaas aan horey loogu baraarugsaneyn wax ka qabashadooda. Maskaxda oo la tuujiyo ayaa waxaa ka dhalan kara wax yar oo fikir ah oo bilicda iyo muuqda waddanka wax weyn kabadeli kara.
Arrintaasi waa waxa ugu yar ee talowadaag ah oo aan kaga qaybqaadannkarno horumarka waddankeena ka socda annaga oo cidna aan magan uga noqon. Horaaa loo yidhi “safar kasta oo kun Mayl ama KM ah waxa uu ku biloowdaa hal tallaabo oo socod ah (Every thousands miles began with single digit step).”
W/Q Asadnaa Suudi
Falaanqeeye siyaasadda Soomaaliya iyo dhaqanka Soomaalida
Issimadda Puntland oo qado Sharaf u sameyaay Wafdiga RW khayre (Sawiro)
Puntland iyo Taliyaaniga oo iska kaashanaya ogaanshaha Tiradda dadka Kunool Puntland (dhegayso)
Nasra sharaf 2 years ago
What an incredible article! Daljir waa ku mahadsanyahey qormooyinka wax ku oolka ah sida aad noogu soo gudbisaan. Fadlan qoraagaan asadnaa qormooyinkiisu xiiso gooni ah ayee wataan.